Red Hat Enterprise Linux 8.1 Yakaburitswa Zvakasarudzika Neaya Matipi Matsva | Linux Vakapindwa muropa
Nguva pfupi yapfuura, Red Hat akakanda vhezheni itsva yeako uchishandisa system. Kunyanya zvakanyanya, izvo zvatiinazvo kubva masikati ano ndizvo Red Hat Enterprise Linux 8.1, inozivikanwawo seRHEL 8.1, iyo inosanganisira akawanda maficha maficha, anosanganisira akagadziridzwa zvinhu, zvekuchengetedza zvigadziriso, nyowani yekuvandudza maturusi, akavandudza otomatiki, uye akagadziridzwa madhiraivha anovandudza kutsigira kweakawanda Hardware.
Zvisingashamisi, Red Hat yakatora mukana wekuburitswa kunatsiridza mashandiro ehurongwa hwekuita futi. Ndizvo vhezheni itsva yeRHEL ndiyo yekutanga yekuvandudza kuRed Hat's 8 nhepfenyuro kubvira pakatangwa iyo yekutanga vhezheni yekupedzisira july. Iyo inouya nezvinhu zvakawanda zvitsva uye pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kunaka iwo.
Pfungwa dzeRed Hat Enterprise Linux 8.1
Container-centric SELinux profiles izvozvi zvaverengerwa kubvumidza manejimendi masisitimu kugadzira mamwe marongero akachengetedzeka ekuchengetedza kupinda kwemidziyo yeyakagadziriswa system zviwanikwa.
Yakawedzera FIPS-140 zvitupa uye zvakajairika maitiro.
Mano ekugadzirisa firewall mitemo uye masisitimu masevhisi kubva kuRed Hat Enterprise Linux web console.
Kugona kumbomira uye kutangazve chaiwo michina.
Rutsigiro ruzere rweLivepatch, zvichibvumira isu kumisikidza dzimwe nyowani kernel vhezheni tisingatangisezve sisitimu yekushandisa kuitira kuti shanduko dziite.
Zvishandiso zvitsva zvevagadziri.
Maitiro matsva ekushandisa.
Mitauro mitsva yakaverengerwa.
Tsigiro yemamwe sarudzo yekumisikidza yevashandisi veSSH uye makiyi muMufananidzo Wemaki.
Tsigiro yemafomati matsva emifananidzo akasiyana emapuratifomu egore, senge Alibaba Cloud uye Google Cloud Platform.
Tsigiro yakawedzerwa kune yazvino mavhezheni eanonyanya kufarirwa Open Source maturusi nemitauro, kusanganisira Golang uye .NET Core.
Kugadziridza kwekuita, muchidimbu nekuda kwekuitwa kwemidziyo mitsva senge eBPF uye XDP
Iyo nyowani vhezheni ikozvino inogona kutorwa kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Red Hat Enterprise Linux 8.1 Yakaburitswa Pamutemo Neaya Matipi Matsva
Iyo nyowani yeNetflix chimiro. Hollywood haifarire, asi vashandisi vazhinji vanozoida